Shabelle Media Network – Madaxweyne Xasan sheekh oo sheegay In Midowga Yurub shirweyne ay u qabanayaan Soomaaliya HOME
Madaxweyne Xasan sheekh oo sheegay In Midowga Yurub shirweyne ay u qabanayaan Soomaaliya
maalik_som January 31, 2013
Brussels ( Sh.M.Network) Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Max’uud ayaa Sheegay in Sanadkaan Gudihiisa Midowga Yurub uu qabanayo Shir Looga hadlayo arrimaha Soomaaliya.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa isaga iyo Wafdi ballaaran oo uu Hoggaaminayo oo Ku sugan Magaalada Brussels ee Waddanka Belguimka waxa ay halkaasi kulamo kula qaateen Masuuliyiin Ka tirsan Ururka Midowgga Yurub.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa Sheegay in Sanadkaan dabayaaqadiisa uu Midowga Yurub Qabanayo Shir Ballaaran oo Looga hadlayo arrimaha Soomaaliya shirkaas oo uu sheegay in Looga hadlayo qorsho Lagu dhisayo dalka Tobanka Sano ee Soo socota.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in Soomaaliya Xilligaan ay Ku Jirto Xilligii Gar gaarka ay U baahneed islamarkaana dowladda Soomaaliya ay Ku guda Jirto sidii Looga samata bixin Lahaa loona Gaarsiin lahaa Heer dib u soo Kabasho ah Taas oo uu sheegay in ay Ku imaan karto iskaashi Shacabka iyo dowladda Dhexmara.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa Sidoo kale Sheegay in uu Heer Gaba gabo ah uu Marayo Miisaaniyadda Midowga Yurub ay ugu tala gashay sanadihii aan Ka soo Gudubnay oo Mardhow ay U furmeyso Miisaaniyadda Kale isagoo sheegay in codsi dheeraad ah oo dowladda ay U baahantahayna ay Gudbiyeen.
Sikastaba Madaxweynaha ayaa sheegay in ay isku afgarteen qodabadii uu kala hadlay Madaxda Midowga Yurub ee Kaalintooda kaga aadan Soomaaliya